विजु महर्जन काठमाडौँ, जेठ १० – गर्मीको मौसममा आइसक्रिम मन नपराउनेको होला ? आइसक्..
कृष्ण अधिकारी काठमाडौँ, ९ जेठ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना बोकेर दुई वर्षअघि र..
चितवन, ९ जेठ । यहाँको सरकारी अस्पतालमा शिशु सघन उपचार कक्ष स्थापनासँगै नवजात शिश..
एजेन्सी जेठ ४ – हुन त दुध पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तर नेशन..
सविना भट्टराई छालारोग विशेषज्ञ केएमसी अस्पताल मानिसको शरीरमा तीन प्रकारका जुम्रा पर्छन् । कपाल, जिउ र गुप्तांगमा फरक–फरक प्रकारका जुम्रा पर्छन् । जुम्रा परेपछि जिउ तथा टाउको चिलाएर अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी महिलाको कपाल लामो र बाक्लो हुने कारण जुम्राको समस्या धेरै हुन सक्छ । जुम्रा पर्ने समस्या र त..
काठमाडौँ, वैशाख २८ – आयातित औषधि चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको तथ्य फेला परेपछि त्यसको मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिको नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घले विरोध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले गरेको नियमनमा आयातित औषधिको मूल्य रु ४०० देखि रु दुई हजार २०० प्रतिशतसम्म महङ्गो भएको तथ्य फेला परेको थियो । आयातित..
काठमाडौँ, वैशाख २८ – उद्योग मन्त्रालयले तिलगङ्गा नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्दै आएको आँखाको लेन्सको उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउने भएको छ । मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच आज सोसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल र प्रतिष्ठानका तर्फबाट आँखा कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा सइन्द्र..
डा. इन्दुप्रसाद ढुंगेल आँखारोग विशेषज्ञ धुलोमा नबस्ने । कुकुर, बिरालो नछुने । रूखबिरुवा र फूललाई सीधै नछुने । पालुवा पलाइरहेको रूखमुनि नबस्ने । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने । प्रदूषित वातावरणमा नजाने । बाहिर जाँदा प्रोएक्टिभ मास्क या चस्मा लगाउने । आँखामा पानी जथाभावी नलगाउने । एसिड अल्कालिकजस्ता रसायन पर्‍यो भने मात्र पानी लगाउने ..